Ny lohahevitra 8 tsara indrindra amin'ny Bic mba hividy amin'ny 2018
Manam-pahaizana amin'ny entam-barotra vita amin'ny tanana sy ny kalitao vita amin'ny hoditra, ny mpikarakara Italie Bric dia efa niasa nanomboka tamin'ny taona 1952. Ny fototry ny famantarana maha-marika azy dia ny filozofia mandehandeha dia lozisialy izay tokony azo zaraina araka ny tokony ho izy. Noho izany dia tsaroan'ny vokatra ny vanim-potoam-piaramanidina fitaterana an'habakabaka, mifantoka amin'ny fomba amam-panao sy ny fahaiza-manao, ary koa ny fahaiza-manaony. Vakio ato ho an'ny fifantenana ny entana tsara indrindra an'ny Bric amin'ny 2017, manomboka amin'ny valizy vita amin'ny spinner izay voafatotra amin'ny hoditra Tuscan ka hatramin'ny kitapo mivantana sy ny fitsangatsanganana.
Ny Kitapo Bric's Bellagio Ultra-Light 30-Inch Spinner dia maneho ny endriky ny marika amin'ny endrika haody sy ny fitaovana ankehitriny. Ny akorandriaka polycarbonate dia sady maharitra sy malefaka, raha ny akanjo hoditra Tuscan kosa manome ny tranga fanintona vetivety izay tsy ho ampy ny mpandinika Amazon. Ny zipo-novoan-drano dia voaro amin'ny fametrahana fitambaran-tsambo TSA-nankatoavina, izay manome anao fiadanan-tsaina sarobidy. Anatina ao anatiny, nozaraina ho efitra roa roa-decker ny tranga, voatahiry amin'ny fisaritahan'ny tarika zipera roa.
Ankoatra ny fisafidianana karazam-pahefana lehibe iray, ny peratra amin'ny akanjo dia manampy amin'ny fitazonana ny kiraro ho anao. Ampifanaraho amin'ny toetoetran'ny haavo ny alim-pitondran'ny aliminiara, ary alaivo ny fahafahan'ireo hetsiky ny kodiarana efatra vita amin'ny kofehy vita amin'ny kofehy japoney. Ny tranga dia miisa 30 "x 21" x 11.5 "(manao ny tsara indrindra mandritra ny dia lavitra). Misafidiana loko isan-karazany, anisan'izany ny manga, mena, mena ary mainty. Raha misafidy loko kokoa ianao, dia eritrereto ny fividianana fandefasana entana sarobidy mba hitazonana ny valizinao hitadiavana vaovao ela kokoa.
Ny fametrahana 25 "x 18" x 11 ", ny bric's MySafari 25-inch Medium Spinner dia safidy lehibe ho an'ny fitsangatsanganana fohy. Izy io dia vita tamin'ny loko mainty hoditra maintim-borona, marika Bric, toy ny akanjo, fa manana ny faharetan'ny PVC. Natao ho toy ny tain-drendrika sy toetrandro izy io, tsara tarehy na dia aorian'ny fampiasana azy aza; raha toa kosa ny karazana hoditra feno Tuscan dia manampy amin'ny endrika ankapobeny. Ny trano midadasika dia misy fantsom-paty tsy misy rano misy rano.
Ampiasao ny fatorana fatoriana mba hitazonana ny fikarakaranao amin'ny fiara mandritra ny transit, ary ny paosin-kitapo mipetaka matevina mba hanavahana ny akanjonao amin'ny tovovavy. Eo anoloana ny kitapo, dia hahita pocket ivelany avy any ivelany ianao ho an'ny fanangonana fanampiana farany fanampiny. Ny kitapo dia mora manova, miaraka amin'ny fehezan-dalàna azo alaina sy kodiarana efatra. Ny fikojakojana ny TSA-nankatoavina dia miantoka fa ny entana dia tonga amin'ny ampahany iray, raha toa kosa ny marika entina handefasana entana dia azo ampiasaina amin'ny fangatahana entana.
Ny Bruc's Pronto 28-Inch Rolling Duffel dia iray amin'ireo saram-pitaovana lehibe indrindra eran'i Bric amin'ny Amazon. Miaraka amin'ny fomba mahazatra azy, dia tonga lafatra ho an'ireo izay mankasitraka ny fahatsorana. Mbola tsara kokoa aza, ny fiarovana amin'ny alàlan'ny FORTE tsylon dia miaro ny fampiasam-bola amin'ny alàlan'ny fanoherana ny ranomaso, ny pikan-kavina ary ny fako. Ny solosaina PVC manjelatra dia manampy amin'ny fampiroboroboana ny duffel amin'ny vahoaka, raha toa ny zipo-fonon'ny U-form kosa manome fahafahana miditra amin'ny efitrano lehibe.
Ao anaty ao, hitanao ny paosin-kitapo matevina sy ny bakteria mifatotra. Ataovy ireo fitaovana fidirana haingana toy ny elektronika na pasipaoro ao amin'ny paosin'ny efitrano ivelany. Ny duffel dia manana haba roa PVC voahofana, saingy mora mora kokoa amin'ny fampiasana ny famantaran-dàlana sy ny kodiaran-kodiarana maivana. Meny fitetezana Fitaovana manokana Hamorona kaonty Hiditra Valam-pejy Lahatsoratra dinika Ny '' skin '' Voasintona Fijerena Hamaky Hanova
Vita avy amin'ny 100% Polyamide, ny Bric's X-Travel 2.0 lehibe 30-inch Spinner dia tena maivana. Mahagaga ihany koa izany, ka ahafahanao manatsara ny tahirin-tsakafo anatiny efa misy 30 "x 19" x 10 "kitapo. Ny ivelany dia mifamatotra amin'ny fitsaboana amin'ny rano, raha toa kosa ny fanamafisam-pahefana dia manampy amin'ny fampitomboana ny fahamarinan-toerana. Ampiasao ny fantsom-pirafitr'ady sy ny fantsom-pirafitranonao mba hitazonana ny fikarakarana anao.
Eo amin'ny ivelany, ny tranga dia manasongadina paosy roa mifatotra sy ny andian-tsokajin-doha sy andaniny. Ireo kodiarana efatra ireo dia natao mba hahomby amin'ny làlana eny an-dalambe rehefa eny amin'ny seranam-piaramanidin'ny seranam-piaramanidina izy ireo - ka mahatonga ny dian-tongotra ho any A sy B kokoa ho mora kokoa. Ny telescopic handle dia miditra ao am-paosiny ho an'ny fitehirizana tsara.
Jereo ny fanadihadihana bebe kokoa momba ny kitapo ankamantatra ankafizinay azo vidiana.
Natao ho an'ny fanamafisana ny fampiasana ny seranam-piaramanidina maro, ny "21" x 15.2 "x 9" ny kitapo Bric ny 21-inch mpandeha. Ny firafitry ny foitra dia manampy amin'ny fitazonana ny kitapo maivana, raha toa kosa ny loko oliva manintona sy ny kognita Tuscan lantihy no mahatonga azy ho tsara tarehy satria mahomby. Ny endriny vita amin'ny PVN-tavy vita amin'ny lamba vita amin'ny PVN dia mijery ary mahatsiaro tena ho toy ny andry, miaraka amin'ny tombony ho mora kokoa amin'ny fanadiovana.
Ny mpitsikilo am-pihazakazaka indrindra dia mahita ny endrika ara-ergonomic ny tranga, izay ahafahana mametraka toerana malalaka. Ao anatiny, misy fiara mifamatotra amin'ny fatorana; Raha toa kosa ny pocket ivelany dia tonga lafatra mba hikolokolo ny ilainao amin'ny sidina. Ampiasao ny fefy teleskaopy sy kodiarana efatra, mba hialana amin'ny elanelana amin'ny ankapobeny. Ity fividianana ity dia ahitana marika fametrahana entana sy famerana.
Mila fanampiana bebe kokoa amin'ny fitadiavana izay tadiavinao ianao? Vakio amin'ny alàlan'ny lahatsoratra entina mitondra kitapo tsara indrindra .
Ny kitapo fitaterana X-Bag ny kitapo vita amin'ny X-Bag dia vita avy amin'ny polyamide maivana sy matevina ary mihetsiketsika amin'ny hoditra Tuscan. Izy io dia manasongadina pejy roa (tonga lafatra amin'ny tontolonao na tavoahangin-drano), ary ny pocket lehibe midadasika ho an'ny zavatra tianao hotazoninao mora foana. Ny efitrano maina dia azo antoka amin'ny alàlan'ny tapa-tongotra sy baoritra ary misy pocket kely ho an'ny sangan'asanao.
Atsofohy amin'ny kibonao ny kitapo misy ny kitapo, na manamboatra azy amin'ny kamiao sy fiaramanidina fiaramanidina mampiasa ny hoditra manify. Ny lamosin'ny kitapo dia mavesatra be noho ny fampiononana fanampiny ary misy rantsantanana iray izay ahafahanao mivezivezy amin'ny vala ny entanao lehibe indrindra. Meny fitetezana: 12,5 "x 15.5" x 7.5 ".
Ny safidy tonga lafatra ho an'ireo mpankafy amin'izao fotoana izao, ny Bric's Riccione 27-inch Medium Spinner dia vita tamin'ny polycarbonate avo-tech. Midera ny faharetany, ny loko manjavozavo, ny endriny manintona mibaribary sy ny felam-boninkazo dia manamboatra fanambarana lehibe ihany koa. Ao anaty ao, hitanao ny efitrano fanakonana izay misaraka amin'ny fizarana ambany amin'ny alàlan'ny fizarana zipidana miaraka amina paosin-trano. Amin'ny 27.5 "x 19" x 11 ", dia tranga iray lehibe tokoa izany; Fa ny kodiarana mipetaka mora kokoa sy ny fomba amam-pihetsika maromaro dia manampy amin'ny fanajana ny lanjan'ny sandrinao sy ny sorokao. Ao amin'ny manga, mainty, mena na fotsy, dia misy ihany koa ny TSA lock tafiditra.
Ny makabeo lehibe Sportina Tote dia vita avy amin'ny polyamide mora vidy sy tsy misy rano. Ny akanjo vita amin'ny hoditra Tuscan sy ny zipaingotra dia mampiditra singa iray amin'ny style timeless, raha ny malalaka 18 "x 13" x 6 "dia malalaka nefa tsy lehibe loatra. Ny toto ihany koa dia azo atao amin'ny endriny manokana, miaraka amina vinaingitra izay azo atao amin'ny soroka na miova mba hamoronana kofehy tokana. Azo alaina ihany koa ny paosin-davenona ao anaty, mamorona kitapo mitokana, kely kokoa miaraka amin'ny fehiny manokana. Misafidiana karazana loko malaza, anisan'izany ny mainty, manga, mena ary vy.
Te-hijery ireo safidy hafa ve ianao? Jereo ny torolàlana momba ny fitsangatsanganana tsara indrindra .
Top Shoes ho an'ny mariazy
6 Fanomezana akanjo tonga lafatra sy Accessories ho an'ny mpivahiny
Ny Items 8 Best Briggs & Riley Baggage mba hividy amin'ny 2018
Top 15 Surf Spots any Los Angeles
Mofomamy manokana ho an'ny fampakaram-bady, fitsingerenan'ny andro nahaterahana sy bebe kokoa
National Fireworks ao amin'ny Harbor National National
Nitsidika ny nosy Venice
Mitombo ny toetr'andro any Japon
Fogo de Chao manolotra sakafo Breziliana nentim-paharazana tany Indianapolis
Aiza i Budapest?
Riviera Maya any Mexique
Zavatra hatao any Sonoma, Californie
Jumbo ny trano fialamboly Kingdom